Kude ngezinye izikhathi isikole eMpumalanga ukupheka uthuthumele kithi ngokuphelele amazing ukunambitheka inhlanganisela kanye aesthetics yayo yasekuqaleni. Ikhekhe in the isitayela Malaysian - isibonelo esiphelele we Amazing khekhe amasiko eningizimu-mpumalanga ye-Asia. Yenza kophudingi isisindo aluhlaza imibala okungokwemvelo waqala eMalaysia, futhi ukusuka lapho fashion ngokushesha lasakazekela China, Korea, eJapan, Singapore nakwamanye amazwe empumalanga. Namuhla, labapheki kusukela Indochina Confectioners zibhekwa kakhulu emhlabeni wonke ukusebenza kule nqubo. Kodwa into okurarako wukuthi ungaphinda yobuciko eminingi futhi uqobo. Yiqiniso, udinga ukuba abanye ulwazi theory kanye umkhuba ngangokunokwenzeka.
Esinye sezici eziyinhloko esiwuphawu - palette zemvelo. Eqinisweni, iningi Confectioners zanamuhla ziyizikhali kabanzi esetshenziswa ubhuqu gel imibala. Kodwa ochwepheshe zangempela benze kanjalo, okokuqala nomuntu obuka umuntu emgwaqweni ligcwele ikhekhe sokuthi ukhilimu ezinemibala ayo izithelo nemifino. imibala uvaliwe nge ezihlukahlukene shades yemvelo - Imfanelo esisemqoka, okumele abe ikhekhe ku isitayela Malaysian.
Cream Traditional - meringue Swiss
Ngisho nabantu abangayazi kude kakhulu art esithengisa amaswidi, kuba ngokushesha ecacile: amakhekhe Malaysian ehlotshiswe ibhotela ukhilimu. Eminyakeni yamuva, abaningi usibize uphambene, zikhetha a amafutha esindayo futhi okunamafutha abe ehlukile elula. Kodwa amakhekhe Malaysian isitayela izithombe adonsa umcabango, okulungiselelwa nokusetshenziswa uwoyela. Swiss meringue ukhilimu - okukodwa kokukhethwa kukho ethandwa kakhulu ukuhlobisa la nama-dessert.
Ukuze yayo ukulungiselela 3-protein ne-95 g ushukela ukufuthelana kwi okugeza umusi, govuza njalo. Lapho ushukela siphela ngokuphelele, futhi ungqimba sikhula, asuse pan ekushiseni uphehle ukhilimu mixer kuze iziqongo esitebeleni. Kuzothatha okungenani angu-10. Khona-ke kancane wengeze uwoyela, wathambisa emazingeni okushisa okuvamile. Ubude edingekayo 155, mixer kungcono ukushintshela yijubane eliphansi bese uqhubeke kushaywa kuze ukhilimu ngeke bushelelezi ngokuphelele futhi shiny. Izimbali izingcezu is imali kwi ephepheni baking usebenzisa esikhwameni khekhe, ke wathumela ukuba efrijini imizuzu engu-15. Ngemva kwalokho kuyoba lula ukuhambisa ikhekhe.
Lokhu ukhilimu emnene ebamba ezakheke kahle, has a lokucuketfwe fat aphansi kunamanye uwoyela eziningi. Pheka ke nje, udinga uphehle 200 g le-bhotela, 200 of mascarpone kanye amagremu 100 ushukela oluyimpuphu. Ngokukhethekile, engeza ku ukhilimu ingcosana yashizi lemon ikhasi amaconsi ambalwa brandy. Cream ezinemibala emihle gel nodayi. izimbali Frost kudingeka cishe imizuzu engu-10-15, khona-ke kalula isuke umhlobiso phezu ikhekhe ku isitayela Malaysian.
Asian emabhontjisi nokunamathisela
Ngokumangalisayo, eMpumalanga Ekude, ngisho ubumnandi ubhontshisi kuphekwe. pasta Mikhulu ezinjalo ukuze ukuhlobisa ikhekhe ku isitayela Malaysian. Kuyinto enhle ikakhulukazi kulabo abasanda kuqala ukufunda futhi "ugcwalise isandla". Ngokuba ukulungiswa ubhontshisi ofanele evamile emhlophe. Cwilisa ubhontshisi ubusuku ngamanzi abandayo. Ekuseni sokukhipha amanzi, ukwengeza indawo entsha ukupheka. amaminithi angu-5 ngemuva abilayo ubhontshisi, hlambulula bese uhlanza it kusukela isikhumba bese gqoka umlilo. Pheka ubhontshisi kudingeka cishe ihora. Ngemva kwalokhu mass kufanele kube kathathu nge ngesihlungo bese ngokusebenzisa izicubu ukuba ucindezele konke emanzini futhi baqala ukuba nithele phansi unama. Engeza 320 amagremu ushukela, ivuse futhi upheke kuze pasta ayisaxhunyanisiwe econsa evela spoon, kodwa ahlale sasivumela ketshezi. Ngezinye ukupholisa ngeke ukushwaqa. Izimbali akhiwa inqubo efanayo njengoba ukuthi lamafutha ukhilimu, kodwa efrijini badinga ukubamba isikhathi esijana, okungenani isigamu sehora.
Yini kufihliwe ngaphansi ukhilimu?
Ikhekhe in the isitayela Malaysian ingalungiswa ngokusho zokupheka ahlukahlukene. Ngokuvamile, ngaphansi ungqimba imibala okumnandi efihla bhisikidi evamile. Isimo main - ukuma cylindrical. Uma unquma ukufunda umhlobiso wamaqebelengwane ngesitayela Malaysian, usebenzisa elula, zokupheka neshaya amaqebelengwane.
Ngokucophelela apple pie: iresiphi kuhhavini
I yokugcwalisa izithelo isaladi? Salad izithelo isaladi
Ifayela: amagama wefayela. Igama eliphelele, elifushane, elide, elungile nelingalungile lefayili, ukwakheka kwalo, ithempulethi kanye ne-mask
Iyini intuthuko: izinto kanye namafomu. Izibonelo zentuthuko
Petsamo-eKirkenes ukusebenza usuku, imiphumela, izithombe